RT kernel (latency low) ကိုအသုံးပြုခြင်း Linux မှ
ဒီဘလော့ဂ်ရဲ့နောက်လိုက်များနှင့်ဝေဖန်သုံးသပ်သူ Miguel Mayol ကတော့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုအကြံပြုခဲ့သည် ဟစ်တလာ RT kernel များအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအချို့အပိုင်းများတွင်ထုတ်ဝေရန်နှင့်တိုးချဲ့ရန်ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
အ RT kernels ခွင့်ပြုပါ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည် အချို့အတွက် အထူးသဖြင့်အခြေအနေများဥပမာအားဖြင့်၊ အသံတည်းဖြတ်ခြင်း (သို့) တေးဂီတတူရိယာများအသုံးပြုခြင်း။
1 Multitasking kernel
2 Task switching ဟာကုန်ကျစရိတ်နဲ့ပါ
4 ဦး စားပေးမှုများ
5 Kernel RT (သို့မဟုတ် latency နိမ့်)
6 ဘယ်အချိန်မှာ RT kernel ကိုသုံးရသလဲ။
7 အဘယ် latency အကြံပြုလိုတယ်?
Linux kernel သည်ခေတ်မှီ operating system များကဲ့သို့ multitasking ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာပရိုဂရမ်များစွာသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်လည်ပတ်နေသည်ဟုဆိုလိုသည်။
တကယ်တော့ဒါကအတိအကျမဟုတ်ပါဘူး။ သင်လုပ်တာကပရိုဂရမ်တွေကိုတန်းစီထဲထည့်ပြီးမိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာကသူတို့ကိုအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိစီမံပေးတယ်။ ၎င်းသည်ကုန်သွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာသည်အလုပ်ကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီး၎င်းကိုတစ်ဝက်ခွဲထားကာနောက်တစ်ခုသို့လမ်းလွှဲပေးသည်။ ဤအချိန်ပမာဏကိုကွမ်တန်သို့မဟုတ်အချိန်ကာလအပိုင်းအခြားဟုခေါ်ပြီး၎င်းသည်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ရန်မလိုပါ။
ကောင်းမွန်သောနှိုင်းယှဉ်ချက်တစ်ခုသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်ပန်းကန်များစွာကိုပြင်ဆင်နေသည့်ဘားတွင်ချက်ပြုတ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ခါးပေါင်မုန့်အသားညှပ်ပေါင်မုန့်အချိုမှုန့်အသုပ်ရောစပ်ပါ။ ယခုငါပေါင်မုန့်ကိုကျိုးပဲ့ပြီးဒယ်အိုးကိုဖွင့်သည်။ ဆလတ်
အကယ်၍ ကွမ်တန်သည်သေးငယ်လွန်းပါက၊ လူသားကဲ့သို့သောနှေးကွေးသောလေ့လာသူအတွက်ထူးခြားသောအထင်အမြင်မှာမြန်ဆန်သောပရိုဆက်ဆာအစားလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်နေသည့်အစားကျွန်ုပ်တို့တွင်၎င်းတို့တွင်တစ်ခုစီအတွက်နှေးကွေးသောပရိုဆက်ဆာရှိသည် (မီးဖိုချောင်ထဲမှချက်ပြုတ်သူများစွာသည်တဖြည်းဖြည်းချင်းစီလုပ်နေကြသည်။ တစ်ခုတည်းပန်းကန်) ။
Task switching ဟာကုန်ကျစရိတ်နဲ့ပါ
Multitasking သည်အခမဲ့မဟုတ်ပါ။ အမှန်မှာ၊ အလုပ်တစ်ခုကိုနှင်ထုတ်ခြင်းနှင့်နောက်တစ်ခုကိုတင်ခြင်းသည်အပိုအလုပ်ဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ဆောင်မှုကို 'context switching' သို့မဟုတ် 'task switching' ဟုခေါ်သည်။ CPU အနေဖြင့်ပရိုဂရမ်များကိုတစ်လုံးချင်းစီအနေဖြင့် 'ချပ်' များသို့ဖြတ်ပြီးအချင်းချင်းမှခုန်ကူးခြင်းထက် ပို၍ အကျိုးရှိသည်။ သို့သော်စနစ်သည်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မည်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ၀ င်းဒိုးအများအပြားဖွင့ ်၍ မရပါ၊ သို့မဟုတ်ဆာဗာတစ်ခုတွင်တောင်းဆိုမှုများကိုတစ်ပြိုင်တည်းတက်ရောက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ငါတို့၏ထမင်းချက်သည်ပုစွန် ၂၀ ကီလိုနှင့်သံလွင်သီး ၂၀ ကီလိုဂရမ်ကိုဖယ်ရှားပစ်ရမည်ဟုဆိုပါစို့။ အလုပ်ဘယ်လိုစီစဉ်ထားသလဲ
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG … C AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA …
ဆန့်ကျင်ဘက်အစွန်းရောက်သူသည်ပုစွန်တုပ်ပြီးလက်များကိုဆေးကြောမည်၊ သံလွင်သီးကိုခုတ်ရမည်၊ လက်များကိုဆေးကြောရမည်ဖြစ်သည်။ ပုစွန်၊ သံလွင်၊
C သည်အခြေအနေတွင်ပြောင်းလဲမှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။ လက်ဆေးခြင်း၊
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်စားပွဲထိုးတစ် ဦး သည်ဖောက်သည်များ၏တောင်းဆိုချက်များကိုစုဆောင်းသည် -“ ပုစွန်တုပ်သူတစ် ဦး!” ... “ သံလွင်ပင်တစ်ပင်!” ... နှင့်မီးဖိုချောင်သို့လွှဲပြောင်းပေးသည်။
ပထမကိစ္စတွင်ဖောက်သည်တစ် ဦး ၀ င်ပြီးပုစွန်ဆိတ်တစ်တောင်းတောင်းဆိုပါစို့။ ပြproblemနာမရှိဘူး၊ ချက်ချင်းပဲပေးတယ် သို့သော်သူကသံလွင်ကိုတောင်းလျှင်ကော။ ပုစွန်တွေအားလုံးအခွံမပေါက်ခင်အထိစားပွဲထိုးကမတတ်နိုင်ဘူး။ ဤကိစ္စတွင်, အောင်းနေချိန်, တောင်းဆိုမှုတစ်ခုအဖြေကိုသည်အထိသည်အထိဖြတ်သန်းသောအချိန်ကာလသည်အလွန်မြင့်မားပါလိမ့်မယ်။
ဒုတိယကိစ္စတွင်၊ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတောင်းဆိုသည့်အရာ၊ ၎င်းသည်အချိန်တိုအတွင်းရရှိနိုင်ပြီးဖြစ်ရပ်နှစ်ခုလုံးတွင်လည်းအတူတူပင်ဖြစ်သည်။ latency သည်နိမ့်သော်လည်း၊ ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် - အခြေအနေအပြောင်းအလဲများကြောင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းခြင်း၊ CPU သည်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာတာ ၀ န်များကိုပံ့ပိုးမှုပေးမည့်အစားတိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်သောအချိန်၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်နားလည်လိမ့်မည်။
သိသာထင်ရှားသည်ဤကိစ္စတွင်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်သည်ရိက္ခာပမာဏနှင့်တောင်းဆိုမှုများ၏စာရင်းအင်းဖြန့်ဝေမှုအပေါ် မူတည်၍ အလယ်အလတ်တန်းစားဖြစ်လိမ့်မည်။ Queue သီအိုရီသည်ထိုအခြေအနေများကိုလေ့လာရန်နှင့်အကောင်းဆုံးအဖြေများပေးရန်တာဝန်ရှိသည့်သင်္ချာဘာသာရပ်ဖြစ်သည်။
သင်မြင်သည့်အတိုင်း latency နှင့် performance သည်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် rt kernels သည်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုပေးသည်ဟုဆိုခြင်းသည်မမှန်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်, latency ကိုလျှော့ချစက်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလျော့နည်းစေခြင်းငှါ, ဒါကြောင့် web သို့မဟုတ်ဒေတာဘေ့စဆာဗာများကဲ့သို့စူပါအမြန်တုံ့ပြန်မှုမလိုအပ်သောစနစ်များအတွက်မကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ဆန့်ကျင်စွာအနေဖြင့်၊ latency low kernels များသည်ပြင်ပလှုံ့ဆော်မှုများကိုအများဆုံးတုန့်ပြန်မှုလိုအပ်သောအခြေအနေများတွင်ဥပမာ - စက်မှုထိန်းချုပ်မှုစနစ်များသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သောမာလ်တီမီဒီယာအပလီကေးရှင်းများ - ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြန်တုံ့ပြန်မှုကိုအာမခံရာတွင်စက်၏စွမ်းအား၏အစိတ်အပိုင်းကိုစွန့်လွှတ်သည်ကိုသိသောကြောင့် ။
multitasking စနစ်များတွင်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည့်အရာတစ်ခုမှာလုပ်ငန်းများကို ဦး စားပေးအမျိုးမျိုး ပေး၍၊ အရေးအကြီးဆုံးသူများသည်ပရိုဆက်ဆာမှအချိန်နှင့်အချိန်တိုအတွင်းနည်းသောအချိန်များရရှိရန်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန် kernel တွင် 'nice' command ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ငါတို့စားဖိုမှူးသည်သံလွင်သီးများထက်ပုစွန်များပိုမိုစားသုံးရန်မျှော်လင့်ပါကယခင်သူစားရန်အတွက်အချိန်ပိုပေးသင့်သည်။
Kernel RT (သို့မဟုတ် latency နိမ့်)
သာမန် kernel များနှင့်ကြုံတွေ့ရသောပြtasksနာမှာလုပ်ငန်းများကိုမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုပြတ်တောက်။ မရပါ၊ အချို့သောကွပ်ကဲရေးအမှတ်များသို့သူတို့ရောက်သွားရန်စောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းတို့သည်အခြားတစ်ခုသို့ပြောင်းရန်ဖြစ်သည်။ ဒါကကျနော်တို့ latency ဟုခေါ်တွင်သောအရာကိုမိတ်ဆက်။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင် RT kernel များသည်ပုံမှန် kernel များထက်နေရာများစွာတွင်အလုပ်များကိုကြားဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းတို့သည်ပိုမိုပါးလွှာသောအချိန်ကာလများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိအလုပ်ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာနှင်ထုတ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး စားပေးလုပ်ငန်းသည် CPU ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြည့်ရှုနိုင်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်အောင်းနေချိန်နိမ့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
RT kernel ကထိုအချိန်တွင်အရေးတကြီးလိုအပ်သည့်အချက်မှာသံလွင်ဆီကိုအမြန်ဆုံးသွတ်သွင်းရန်ဖြစ်နိုင်သည်ဆိုပါက RT kernel ကပုစွန်တစ်ဝက်ကိုစွန့်ခွာရန်ခွင့်ပြုပြီးပုံမှန် kernel တွင်ပုစွန်ဖြူကိုအဆုံးသတ်ရန်လိုအပ်သည်။
Slices ပိုမိုပါးလွှာအောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်းအပြင် RT kernel များမှာလည်းပိုမိုတင်းကျပ်သော ဦး စားပေးစနစ်တစ်ခုရှိသည်။ ထိုတွင် ဦး စားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များသည် CPU ကိုထိန်းချုပ်ရန်အချင်းချင်းညှိနှိုင်းခြင်း (preempting)၊ သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်အခြားပရိုဂရမ်များကိုနှေးကွေးစေသည်။
ဘယ်အချိန်မှာ RT kernel ကိုသုံးရသလဲ။
၁) ကျွန်ုပ်တို့သည် latency အလွန်လိုအပ်သောအခါစက်၏အလွန်မြန်သောတုံ့ပြန်မှုဖြစ်သည်။ အရှင်းလင်းဆုံးဥပမာမှာ virtual tools များ၏လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် MIDI ကီးဘုတ်ပေါ်ရှိခလုတ်ကိုနှိပ်သောအခါချက်ချင်းအသံထွက်ရန်လိုအပ်သည်။
၂) ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်တင်းကြပ်သော ဦး စားပေးမှုများကိုလိုအပ်သောအခါ၊ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသော ဦး စားပေးလုပ်ငန်းကိုကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်အရာကမှမနှောင့်ယှက်ပါ (အကယ်၍ CPU အလွန်အမင်းအလွန်အမင်းများလွန်းသောကြောင့် ၁၀၀% အသုံးပြုမှုထက်ကျော်လွန်သောကြောင့်) ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Ardor နှင့်အတူအသံသင်ကြားမှုတစ်ခုကိုအသံဖမ်းယူနေပြီး၊ မိုက်ကရိုဖုန်းမှ hard disk သို့အသံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြတ်တောက်သွားသရွေ့ကျွန်ုပ်တို့ faders များ၏ refresh frame ကိုဆုံးရှုံးသွားလျှင်အရေးမကြီးပါ။ RT kernel သည်အသံတစ်ခုမှမပျောက်ဆုံးသရွေ့ fader refresh ကိုလိုအပ်သလောက်နှေးစေလိမ့်မည်။
ယေဘူယျအားဖြင့် RT မဟုတ်သော kernels အသစ်များသည်သူတို့၏အချိန်ဇယားဆွဲစနစ်နှင့် ဦး စားပေးစီမံခန့်ခွဲမှုများကိုများစွာတိုးတက်စေခဲ့သည်။ သင့်တွင် CPU ကို၎င်း၏ဖြစ်နိုင်ချေအကန့်အသတ်မရှိ ((၅၀% အောက်အသုံးပြုမှုကိုအောက်တွင်ပြောပါ) သို့မဟုတ် အကယ်၍ အခါအားလျော်စွာအသံတွင်သေးငယ်သောသေးငယ်သည့်ဖြတ်တောက်မှု (ကလစ်နှိပ်ပါ) (အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသော xruns) ရှိလျှင်၊ ပုံမှန် kernel သည်acceptableုံလက်ခံနိုင်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးသည်။
အဘယ် latency အကြံပြုလိုတယ်?
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, 10 ms အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရာအားလုံးသည်ငါ့အဘို့အဆင်ပြေသည်နှင့် 20 ms ကနေငါပြီးသားနှောင့်နှေးသတိထားမိစတင်ရန်။ ပိုပြီးတောင်းဆိုမှုများကိုလူတွေရှိတယ်။
sudo apt-get ထည့်သွင်းပါ။ linux-headers-lowlatency
sudo apt-get ထည့်သွင်းပါ။ linux-lowlatency
startup တွင်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုလုံး (ပုံမှန် kernel နှင့် latency low) ရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » RT kernel ကိုသုံးခြင်း (latency low)
Jordi Fdez ဟုသူကပြောသည်
ရှင်းပြခဲ့သည် ဟုတ်တယ်၊ ငါဂီတထုတ်လုပ်မှုအတွက် Linux ကိုသုံးတယ်
သာမန် distro တစ်ခုနှင့်ငါ latency ပြproblemsနာများရှိသည်သော
ဗဟုသုတရှိပေမယ့် Linux မှာရှိတဲ့ audio အတွက်မောင်းနှင်အားကများပါတယ်
ငါကောင်းကောင်းရဖို့အတွက် jack တောင်မလိုပါဘူး
Jordi Fdez ကိုပြန်ပြောပါ
Carlesa ၂၅ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်၊ အဲဒါကို CPU + GPU အထူးကြပ်မတ်ကွန်ပျူတာတွက်ချက်မှုတွေမှာကျွန်တော်စမ်းသပ်မယ်။
Ubuntu 12.0 OS ကိုအရင်ကကဲ့သို့ထားခဲ့သကဲ့သို့ "linux-headers-lowlatency" ကိုဖယ်ထုတ်ပါ။ လေးစားပါတယ်
ဆောင်းပါးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အနိမ့် latency cores မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသိရန်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်။ ၎င်းသည်၎င်းနှင့်ယင်း၏အသုံးဝင်မှုအကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုနှိုးဆွပေးခဲ့သည်။ မင်္ဂလာပါ
ဆောင်းပါးကောင်း တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတုန့်ပြန်မှုမြန်သော keyboard ကို run ရန် latency low kernel လိုအပ်ကြောင်းကြားသိရသော်လည်း၎င်းကိုအဘယ်ကြောင့်နှင့်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိခဲ့ပါ။ အဆိုပါနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်အလွန်ရှင်းပါတယ်။
၎င်းသည်ဂီတထုတ်လုပ်မှုတွင်အလွန်အရေးပါသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ VST ကိုအသုံးပြုခြင်း၌ပြောထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့် live performance တွင် MIDI Controller ကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားတူရိယာများနှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်သွားရမည်ဖြစ်ပြီး latency မြင့်နိုင်သည်။ ငါတို့ကိုလှည့်စား
မဟုတ်ပါက virtual tools များအသုံးပြုခြင်းတွင်မဟုတ်ဘဲမှတ်တမ်းတင်ခြင်းဖြင့် interface latency မှတဆင့်တူရိယာများကိုအနက်ဖွင့်သောအခါကျွန်ုပ်တို့ကိုရှုပ်ထွေးစေသည်
ဆောင်းပါးကောင်းတစ်ခု၊ kernel ထဲမှာ latency နိမ့်ကျမှုဆိုတာဘာလဲဆိုတာငါမသိခဲ့ဘူး။
Gerardo Azonos ဟုသူကပြောသည်
အလွန်ကောင်းသော ... ငါတကယ်ကြိုက်တယ်။
ဘာသာရပ်ပြောင်းလဲခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်အများပြည်သူနေရာများတွင်အလုပ်လုပ်ခွင့်မပြုသည့်ဝိုင်ဖိုင် (ကျွန်ုပ်၏ပေါင်ကြိုးမဲ့) ၏ပြproblemနာကိုမည်သို့မည်ပုံဖြေရှင်းရမည်ကိုသိသည်၊ အချက်ပြမှုအလွန်နည်းသည်။
ငါ့မှာ Ubuntu 11.10 ရှိတယ်၊ ငါ့ရင်ပေါင်မှာ: Dell inspiron n4110 ။
Sabayon ကဒီ kernel ကိုသယ်ဆောင်ပေးသည်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် 1000 Hz ဖြင့်ပြုစုသည်။ ၎င်းသည် FPS ဂိမ်းဆာဗာများနှင့် FPS ဂိမ်းများအတွက်နှင့်တောင်းဆိုမှုများရှိပါက၊ databases ကိုသုံးသောသူများ မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်အတွက် Sabayon freeciv မှုတ်သည် ဝေးဝေးနေ
Desktop ပေါ်တွင်၎င်းသည်များသောအားဖြင့်အဓိကကျသောအလုပ်ကို ဦး စားပေးသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အခြားအလုပ်များအတွက်ထိရောက်မှုနည်းပါးသည့်တိုင်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အဆင်ပြေနိုင်သည်။ အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်။
၎င်းသည်၎င်းတို့ကိုထည့်သွင်းခြင်း၊ တစ်ပတ်စစ်ဆေးခြင်း၊ ပုံမှန်အား kernel သို့ပြန်သွားခြင်း - ပုံမှန် - နှင့်၎င်းသည်မည်သို့သွားသည်ကိုမြင်ခြင်းနှင့်မည်သည့်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာများကိုမြင်ခြင်းအပြင်၎င်းတို့တစ်ခုစီသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောသတ်သတ်မှတ်မှတ်လုပ်ငန်းများကိုပြုလုပ်ရန်ကိစ္စဖြစ်သည်။ ။
Gustavo Trepat ဟုသူကပြောသည်
Gustavo Trepat မှစာပြန်ပါ
ကားလို့စ် Martinez ဟုသူကပြောသည်
အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်သည် lowlatency kernel သည်ကျွန်ုပ်နှင့်ကိုက်ညီခြင်းရှိ၊ kernel ရဲ့ latency ကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ မင်္ဂလာပါ
Carlos Martinez ကိုပြန်ပြောပါ
မကြာသေးမီက ubuntu studio distro ကိုကျွန်ုပ် install လုပ်ပြီးနောက်စာမျက်နှာနောက်သို့ကျွန်ုပ်လာရောက်စုံစမ်းခြင်းအားဖြင့် latency နိမ့်ကျမှုကိုသဘောပေါက်လာသည်။ ငါ Operating Systems ၏အခြေခံအယူအဆများအကြောင်းကိုအလွန်ရှင်းလင်းစွာဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်သင်၏ရှင်းပြချက်ပြီးပြည့်စုံသောဖြစ်ခဲ့သည်။ သင်ကထွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ ဂုဏ်ယူပါတယ်
ffmpeg သုံးပြီး screencast လုပ်နည်း